UFerrexpo isitokhwe esinyithi esomeleleyo sokuthenga kwakhona
Ukuhlaziywa: 20 April 2021
Ukuhlala kwicandelo lezinto ezisisiseko, iSwitzerland esekwe eFerrexpo, njengoko igama layo lisitsho, ikwishishini lesinyithi. Yenza iipellets zentsimbi zeshishini lokunyibilikisa isinyithi - iipellets zigqitywa ziifutha.
Ngezixhobo zokugcina eziqhubeka zigqibezela amathemba okubuyela kwimeko yesiqhelo kwimveliso zorhwebo ezisasazeka zisuka e-China zisiya kwihlabathi liphela, iinkampani ezibandakanyeka kwimveliso yegalelo lezinyithi zorhwebo zibuyiselwa ngokufanelekileyo.
Okutsha kuvela kwiCredit Suisse, eyabetha ixabiso ekujoliswe kulo kwisitokhwe se-470p, ithatha ukogquma ngenqanaba elingaphezulu.
Oku kuza ngasemva kumanani emveliso aqinileyo akhutshwe nge-6 Epreli, ngemveliso yekota eza kwi-2.7 yezigidi zeetoni. IFerrexpo ikwalindele ukuba umthamo unyuke phakathi kwe-0.5 ukuya kwisigidi seetoni ngonyaka.
Imveliso yekota yokuqala nayo iphuculwe ngokomgangatho. Iipellets ezikumgangatho ophezulu eziqulathe i-65-67% Fe (umlinganiso womxholo wokucoceka kwentsimbi) wenza i-100% yemveliso kwi-Q1, xa kuthelekiswa ne-97% kwangelo xesha linye kunyaka ophelileyo.
Ukuveliswa koxinzelelo oluphezulu nako kunyukile kwaye ukuphuculwa kolunye lweelayini zepelletizer yenkampani kwagqitywa ngomnye umsebenzi wokuphucula oqhubekayo.
Kwiziphumo zayo zonyaka opheleleyo ezichazwe nge-16 kaMatshi, amanani abonisa ukuba ngaphandle kweCovid inkampani ikwazile ukugcina ukusebenza ngempumelelo kunye nokuphucula ukusebenza ngokunyusa imveliso kunye nokulawula iindleko. I-pivot eyenziwe kakuhle e-China kunye ne-rebound eyomeleleyo kumaxabiso e-iron ore eqinisekisa ukusebenza kwemali okunamandla, okuboniswe kwintlawulo ekhethekileyo yokwahlula kunye nokunyuka okupheleleyo kunyaka ophelileyo wama-26% ekubhataleni kwabanini zabelo.
Ingeniso inyukile I-13% ukuya kwi-1.7 yezigidigidi zeedola (iingxelo zeFerrexpo kwiidola zaseMelika), ezibonisa ukwanda kwemveliso kunye nokuhluthwa.
Isiseko se-EBITDA yayinomdla oncomekayo wama-46% kwi-859 yezigidi zeedola xa kuthelekiswa ne- $ 586 yezigidi ngo-2019, ngelixa ukuhamba kwemali kwimisebenzi kukhule ngama-45% ukuya kwi- $ 687 yezigidi ukusuka kwi- $ 473 yezigidi kunyaka ophelileyo.
Imali iyonke ehlawulwe kwisahlulo ngo-2020 yayiyi- $ 195 yezigidi (2019: $ 155 yezigidi).
Isikhundla sesahlulo esithandekayo sifezekisiwe ngaphandle kokuphinda kutyalwe i-206 yezigidi zeenzuzo kwimisebenzi eqhubekayo kunye nokuhlawula ityala leedola ezili-148 yezigidi, ukubeka inkampani kwizigidi ezi-4 zeedola.
Ethetha ngeziphumo zonyaka opheleleyo, uSihlalo weFerrexpo uLucio Genovese uthe: “Nangona i-COVID-19 ibangele ukuphazamiseka kwiipateni zentsimbi kwihlabathi liphela, indawo yethu embindini phakathi kweYurophu neAsia, kudityaniswa nokuba bhetyebhetye kokusebenza kwethu, kusenze sakwazi ukufikelela I-China kwi-2020, njengoko yavela ngokukhawuleza kubhubhane kugxilwe ngamandla ekukhuleni kugxilwe kwizinyithi. Ukonyuka kwesiphumo kumaxabiso esinyithi, kudityaniswa nokwanda kweQela kwimveliso kunye nolawulo lweendleko, kuye kwaqhuba ukusebenza ngokukuko kwemali kwiQela ngo-2020. ”
Ingeniso yesabelo ngasinye ibinyuka ukusukela ngo-2015 kwaye ngo-2020 yayingu- $ 1.08 isabelo-izinga lokukhula le-57% kunyaka ophelileyo, kuqikelelwa ukuba i-EPS inyuke yaya kuthi ga kwi-1.43 yeedola ngo-2021.
Isivuno sesahlulo sasiyi-2.57% ngo-2020 kwaye siqikelelwa kwi-8.36% kulo nyaka.
Ishishini lenkampani elidityaniswe ngokuthe nkqo liquka ukumbiwa kwesinyithi ukuya kwimveliso yentsimbi ekugxilwe kuyo kunye neepellets, kunye nezinto ezinxulumene noko kunye nentengiso.
UFerrexpo ungumnini wemigodi emibini eUkraine kunye nomzi mveliso wokulungisa kunye nomdla kwizibuko eOdessa. Ukongeza ikwasebenza ngenqanawa yeenqanawa ezisebenza kwiindlela ezinkulu zamanzi zaseYurophu kunye nenqanawa ehamba elwandle ehamba ngeendlela zolwandle zamanye amazwe.
Ukusukela ngomhla woku-1 kuJuni 2020, inkampani yanika ingxelo yoovimba bentsimbi engange-1.7 yezigidi zeetoni. UFerrexpo Ihambisa izinto zentsimbi eOstriya, iSlovakia, iRiphabhlikhi yaseCzech, iJamani kunye namanye amazwe aseYurophu, kunye neendawo zokugaya e China, India, Japan, Taiwan nase Mzantsi Korea.
Iankile eyomeleleyo kaFerrexpo yokukhula kwemivuzo
Nangona kusenokwenzeka ukuba kusekutsha kakhulu ukuba uthethe ngomjikelo wempahla oqhubekayo kwimijikelezo yezoqoqosho, ugweba ngokuqinisa amanani emveliso evela e-China, ibango kwi-2021 kufuneka lixhase ukukhula okuqhubayo kwenzuzo kunye nexabiso lesabelo.
IFerrexpo okwangoku ixabiso nge-411p, i-11% ngasemva kwabahlalutyi 'ekujolise kuko kwixabiso ekuvunyelwene ngalo le-482p, ngokweStockopedia.
Ixabiso lesabelo seFerrexpo kusuku olunye-amakhandlela, ngowama-1 ku-Epreli 20
Kukho umngcipheko onxulunyaniswa nakho nakuphi na ukusilela kwinkqubela phambili ngokuvula kwakhona uqoqosho, ngenxa yobhubhane weCovid oqhubeka nokukhula ngobukhulu kwinqanaba lehlabathi, ngaphandle kwethemba lokuphuculwa kokukhutshwa kwamachiza kumazwe ahambele phambili kwezoqoqosho, ngakumbi lawo aseYurophu ukuya kuthi ga Ishishini likaFerrexpo lixhalabile.
Ukongeza, ukusebenza kwayo e-Ukraine kungaphazamiseka ukuba kukho uhlaselo lwaseRussia lweli lizwe. Nangona kunjalo, iidipozithi ezisebenzayo zikaFerrexpo kwizakhiwo zemigodi zaseYerystivske nasePoltava zikufuphi nesixeko saseKremenchuk, esihlala emlanjeni iDnieper kwaye sikumgama oziikhilomitha ezingama-200 entshona yeDonetsk, ke ngethemba lokuba ayizukubakho.
Kwabahlalutyi abarhwebi abalithoba abagubungela isitokhwe, ezimbini zilinganisela ukuthengwa okuqinileyo, ezimbini ukuthenga kunye ezimbini zokubamba. Amanani amabini athengisayo kwaye enye ithengise ngamandla.
Thenga iFerrexpo (FXPO) kwiqonga lotyalo-mali lwe-eToro nge-0% yekhomishini
tags wmme, igoqo lentsimbi, abasebenzi bezimbiwa